ဘာလချောင်တွေ ကြော်ကြမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » ဘာလချောင်တွေ ကြော်ကြမယ်	16
Posted by အောင် မိုးသူ on Jun 4, 2015 in Food, Drink & Recipes, How To.. | 16 comments
ဒီနေ့တော့ အစားအသောက်ဘက် လှည့်ကြည့်မလားလို့။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးရက်ကတော့
အိမ်က အစ်မတော်က ကင်မ်ချီစားချင်တယ်ဆိုလို့ ကင်မ်ချီတွေ နယ်လိုက်တာ လက်တွေကို
ပူနေတာ ညအိပ်တဲ့အထိပဲ။ ဒီနေ့လောက်ဆို စားလို့ရပြီဆိုတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲက
ကင်မ်ချီဘူးလေးတွေ ကြည့်မိရင်း ပီတိတော့ ဖြစ်မိသား။ ကင်မ်ချီတွေကြည့်ရင်း မနှစ်က
စင်ကာပူက Saragoon ဘူတာက Mall ထဲက ကင်မ်ချီအလကားကျွေးတဲ့ဆိုင်ကို
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ငါးပိရည်လုပ်တဲ့ပို့စ်လေး ဖတ်မိရင်း အကြော်အလှော်
ဘက် ရောက်သွားရာကနေ။ ဘာလချောင်ကြော်အကြောင်း သတိရသွားမိလို့ပါ။
ဘာလချောင်ကြော်ဆိုလို့ ပြီးခဲ့တဲ့လက Miss Universe Myanmar 2014
သျှားထွဋ်အိန္ဒြာရဲ့ အလှူပွဲမှာ လမ်းလုပ်သားတွေကို ကြက်သားဆီပြန် နဲ့ တွဲဖက်စားမယ့်
အကြော်တစ်ခု ကျွေးမယ် ကူညီပေးပါဆိုတာနဲ့ ဟင်းချက်ထမင်းချက်မယ့် အစ်ကိုတစ်ယောက်
နဲ့ တိုင်ပင်တော့ သူက ဘာလချောင်ကြော် ကြော်မယ်ပေါ့။
ဒါဆို ကျနော်ကြော်ပေးပါ့မယ် အာလူးဘာလချောင်ကြော်က စားကောင်းတယ်ပေါ့။
သူကြော်မှာက ငံပြာရည်နဲ့ ငါးပိလေးနည်းနည်းနဲ့ကြော်တာတဲ့။ ကဲ ဒီလိုဆိုလည်း အစ်ကိုသာ
လှူမယ့်နေ့ ကြော်ပြီးလို့ ကြည့်လိုက်တော့။ ငံပြာရည်ကြော်လိုလို ငါးပိကြော်လိုလို
ကြော်ထားတာတွေ့ရတယ်။ သြော် ငံပြာရည်ကြော်ကို ဘာလချောင်ကြော်လို့ ပြောလိုက်တာပဲ
ကိုး။ အဲသည်တော့မှ သိတယ်။
ငါးပိကြော်တို့ ဘာလချောင်ကြော်တို့ဆိုတာလည်း တစ်ခုခုနဲ့ တွဲစားမှ ပိုကောင်းတဲ့
အကြော်မျိုးကိုး။ ဥပမာ – ပေါင်မုန့်နဲ့ ညှပ်စားလည်းကောင်းတယ်။ ဘာလချောင်ကြော်ကတော့
ဒီအတိုင်း ဇွန်းနဲ့ ခပ်စားရင်တောင် ကောင်းတဲ့အမျိုး။
တော်တော်များများလည်း သိနှင့်ပြီးသားနေမှာပါ။ ဘာလချောင်ကြော်ကို အသားနဲ့
ကြော်သလို ၊ သက်သက်လွတ်လည်း ကြော်ကြပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက မေမေကြော်ကျွေး
တဲ့ ဘာလချောင်ကိုတော့ မှတ်မိနေတုန်းမို့။ စားချင်စိတ်ပေါက်ရင် တစ်ပတ်လောက်ခံတာမို့
ဦးစွာ အာလူးကို မထူးမပါး အ၀ိုင်းလေးတွေလှီးပါ။ အခွံနွှာစရာမလိုပါဘူး။ ပြီးရင်
လှီးထားတဲ့ အ၀ိုင်းလေးတွေကို ထပ်ပြီး အချောင်းလေးတွေ ဖြစ်အောင် လှီးထားပါ။
ကြက်သွန်နီကို အ့ကျွတ်ကြော်ရပါမယ်။ အကြွတ်ညီအောင်လို့ အဆက်မပြတ်
မွှေဖို့တော့လိုမှာပါ။ နည်းနည်းလောက် ရဲပြီဆိုရင် ဆီစစ်ပြီး စကာတစ်ခုထဲထည့်ထားရင်
ကြက်သွန်ဖြူ အသေးမဟုတ်ဘဲ ခပ်ကြီးကြီးကို လှီးပြီး အကြွတ်ကြော်ရင်
ပိုကောင်းပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်း အနည်းငယ်ဝါရုံသာ ကြော်ပြီး ဆီစစ်ထားရင်
လှီးထားတဲ့ အာလူးအချောင်းလေးတွေကိုလည်း ဆီထဲမှာ ကြော်ရပါမယ်။
အာလူးချောင်းတွေကို ကပ်မသွားအောင် အမြဲမပြတ်မွှေနေဖို့ မလိုပါဘူး။ ထည့်ထည့်ချင်း
ခဏသာ မွှေပြီး။ အနည်းငယ် အကြော်တင်းအောင် ထားပြီးမှ ပြန်လည်မွှေရပါမယ်။
အဲဒါမှ အာလူးချောင်းလေးတွေဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုမကပ်ဘဲ တစ်ချောင်းချင်းစီး
ကြွတ်ကြွတ်လေးရမှာပါ။ အာလူးကိုလည်း ကြွတ်အောင်ကြော်ပြီးဆယ်ထားရပါမယ်။
အာလူးကို အချောင်းအကြီးကြီးတွေ ကြော်ဖို့မလိုပါဘူး။ အနေတော် အချောင်းလေးတွေဆို
မြေပဲအစိမ်းကိုတော့ ညက်နေအောင်မထောင်းဘဲ မညက်တညတ်နဲ့ ရှစ်စိတ်ခွဲ
ပြီးရင်တော့ ဆီခပ်နွေးနွေးပေါ်မှာ ငရုတ်သီးခွဲခြမ်းကို ကြော်ပါ တူးသွားဆိုးတဲ့အတွက်
ခပ်နွေးပေါ်မှာပဲ ကြော်ရပါမယ်။ ပြီးရင် ဟင်းခတ်မှုန့် ၊ ဆား ကို သင့်တော်သလောက်ထည့်
ပါ။ ပြီးရင် ထောင်းထားတဲ့ မြေပဲနဲ့ ရောမွှေပါ။ မီးခပ်နွေးနွေးမှာ အားလုံး ကျက်ပြီဆိုရင်
ငရုတ်သီးခွဲခြမ်းနဲ့ မြေပဲရောထားတာကို အေးအောင် ခဏတာထားလိုက်ပါ။
အားလုံးအေးပြီဆိုရင်တော့ အရင်က အကြွတ်ကြော်ထားတာတွေကို အားလုံးထည့်
ရောမွှေလို့ ရပါပြီ။ အားလုံးပြီးရင်တော့ အာလူးဘာလချောင်ကြော်ကိုရပါပြီ။ မြေပဲခပ်စိမ့်စိမ့်
အရသာရယ် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ နီကြော်နဲ့ အာလူးအကြွပ်ကြော်အရသာနဲ့ ငရုတ်သီးစပ်စပ်
အရသာတို့ဧာ ဒီအတိုင်းစားလို့ကောင်းသလို ထမင်းလည်းမြိန်စေပါတယ်။
ဘူးနဲ့ ထည့်ထားရင် တစ်ပတ်စာလောက် အသာလေးထားလို့ရတာမို့။ ထမင်းမြိန်စေတဲ့
သက်သက်လွတ် အာလူးဘာလချောင်ကြော်ပါ။ စင်ကာပူရောက်တုန်းကတော့ တစ်ဘူးကြော်
ထည့်သွားတာ ကုန်မှာတောင် နှမြောခဲ့ရပါတယ်။
ဦးကျောက်ခဲ says: အာလူးအစား ဂျူးမြစ်ခြောက်ကြော်တို့ ပဲပုတ်ခြောက်ကြော်တို့နဲ့လည်း ကောင်းတယ်ဗျ…
ဒီမှာတော့… မကြော်ရဲဘူးဗျာ … အနံ့စူးကနဲထွက်လာတင် ဘေးခန်းတွေက တိုင်ကြမှာ…
အဲဒါကြောင့်… စားချင်သမျှ ဘာလချောင်ကြော်မျိုးစုံကို ရန်ကုန်ကပဲ ဝယ်လာခဲ့တော့တယ်…
အောင် မိုးသူ says: ဂျူးမြစ်ခြောက်ပါရင် ပိုသာကောင်းသေး။ အရမ်းကြိုက်။
kai says: နယူးယောက်က သူငယ်ချင်းကတော့ ညှော်မှာကြောက်လို့.. ရယ်ဒီမိတ်တွေကို အကုန်ထည့်မွေလိုက်တယ်ဗျ..။
ခင်ဇော် says: မနှစ် က ရွာ ထိန်းး က စားးဖိုမှူးး တစ်ယောက် ကြော်ပို့ လို့
ပုလင်းးကြီးး တစ်ပုလင်းး ဟာ ထမင်းးနဲ့ စားးလိုက်, ဘီယာနဲ့ မြည်းးလိုက်, ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းး ဒီတိုင်းး စားးလိုက်နဲ့
၂ ရက် အတွင်းး ကုန်ပါရောလားးးး
အော်ဒါ မှာ လို့ ရရလားးးငင်??? နာ က ဘာလချောင်ဆိုတာ
အောင် မိုးသူ says: အော်ဒါမှာမယ်ဆို လက်ခံပေးပါ့မယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ခင်ဇော် says: အမ ကြိုပြောပါ့မယ်။
အမ ရဲ့ ရန်ကုန်အိမ်က တောင်ဥက္ကလာထဲမှာပဲ။
ရက် ကို ပြောထားရင် လာယူလို့ ရတယ်မလားဟင်??
အောင် မိုးသူ says: ရတယ်ရတယ်။
kai says: Balachang / Balichow /balchao ဆိုတာ ကုလားစာဖြစ်ဖို့များတယ်ထင်နေတာ..။
balchao ကတော့ ..ပေါ်တူဂီလို.. pickle တဲ့..။
ပေါ်တူဂီတွေဖြစ်တဲ့.. ငဇင်ကာတို့ဆီကများ.. ရစပီရတာလးမသိ..။ http://www.goanfoodrecipes.com/2011/11/prawn-balchao-goan-prawn-pickle.html
Prawn balchao (Prawn pickle – balchao is Portuguese for pickle). Although this recipe refers to the shellfish as prawns, they are actually shrimps, much smaller than prawns.
I have hadarequests from people foraprawn balchao meal recipe, rather than one forapickle. I’m afraid that I have not been able to find any recipes that refer to prawn balchao asafinished dish. Even the wonderful “India” – Mr Pushpash Pent: ISBN 978-0714859026 states: “The dish is know for it’s piquant character: It is more likeapickle relish and is consumed in moderation”.
If anyone has any helpful information that may clear up this confusion, please do drop meanote via the Contact the Editor link above.–Jerry, aka Chef 18:14, 10 December 2012 (UTC)
Getarough idea of when the recipe will be completed givenastart time or see when you should begin cooking to serve your recipe ataspecified time. Try it now!
Orange arrow.png Createaprintable shopping list for this recipe’s ingredients
5 cm (2″) piece if ginger, peeled and finely chopped
1 teaspoon to 1 tablespoon freshly ground black pepper – see Chef’s notes
1 to2tablespoons chilli powder or your favourite dried chillies, ground toapowder – addalittle atatime and test – you can always add more, you can’t take it away afterwards!
Allow to cool and bottle in sterilised jars. Chef’s notes
This is fantastic – I can’t see it surviving the2week maturation period!
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော်ဖြင့်လေ…
အစားအသောက်ဆိုရင် ချက်ဖို့ ပြုတ်ဖို့.. ကိုယ်တိုင် လုပ်ဖို့..ကို …ဘယ်လိုမှ… စိတ် ပါကြည့်လို့မရ…
အဆင်သင့် ချက်ပြုတ် ဖန်တီးပေးထားပြီးသားကိုသာ.. စားချင်…
.ကောင်းရင်ကောင်းသလို ချီးမွမ်းပြီး..နောက် ထပ် ချက်ကျွေးအောင်သာ..စိတ်က ပါ….
ဆိုတော့…. (ဖွေးဖွေးနဲ့သာ မညားဖြစ်ရင်.. )
ကိုယ့်ဘာသာ ချက်စားမှ ဖြစ်မယ့် အခြေအနေမျိုးရောက်ရင်….
.နေတတ်အောင်… ချက်တတ်အောင်… သင်ယူရအုန်းမယ်..ဗျို့…
အောင် မိုးသူ says: ချက်ရင်းပြုတ်ရင်း တတ်သွားလိမ့်မယ်။ အရေးတယူသင်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ :D
မြစပဲရိုး says: အာလူးဘာလချောင်ကြော် တော့ ကြိုက်ဘူး။
ဘာလချောင် က ငပိ နဲနဲ ပုဇွန်ခြောက် များများ နဲ့ ကြော်တာ လားလို့။
ငပိစားရင် မျက်နှာမှာအဖု တွေ ထွက်တတ်တာမို့ မစားဘဲ နေရင်း နေရင်း ပြတ် သလို ဖြစ်နေပြီ။
အောင် မိုးသူ says: ငပိမပါဘူး။ ပုစွန်ခြောက်ထည့်လည်းကောင်းပါတယ်။ သက်သာအောင် ပုစွန်ခြောက်မထည့်တော့ဘူး။ ဟီး
Ma Ei says: ဂျူးမြစ်၊ ကောက်ညင်းပဲပုပ်၊ မြေပဲ၊ အသားတု အစုံ အစပ်ကြော်…
ကြော်ပီး ပုလင်းထဲထည့် ဟောလစ် တစ်ပုလင်း တစ်ပါတ်မခံ..
Ma Ei says: ကြက်သွန်ဖြူကြော်မေ့ခဲ့လို့ ထပ်ထဲ့တာ…
အောင် မိုးသူ says: အဲံလိုလည်းကောင်းတယ် အမယ်အရမ်းများရင် ပင်ပန်းလို့ အနည်းငယ်သာ လုပ်တယ်။ ဟိဟိ
Mike says: .ဘာလချောင်ကိုပဲပုပ်ပြားနဲ့ကြော်စားတာကြိုက်တယ်ဗျာ